Kedu esi enweta postlinks dofollow na PR9 n'ime obere oge?
Iji mee ka azụmahịa gị hụ na Google, ịkwesịrị ịkwado na 1st ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na peeji nke abụọ rịzọlt rịzọlt. O siri ike ịkwanye saịtị gị ruo TOP nke Google SERP dị ka asọmpi na niche ahịa niile dị elu. Akụkụ abụọ dị mkpa nke nwere ike ime ka azụmahịa ị na-aga n'ịntanetị bụ njikarịcha nchọgharị na mgbasa ozi na gburugburu ebe obibi. Ọ bụ ezie na ịkwụ ụgwọ ọ bụla site na mgbasa ozi nwere ike ịpụta dị oke ọnụ maka ụlọ ọrụ ụfọdụ, njikarịcha search engine nwere ike ime site na obere ego. Otú ọ dị, ọ bara uru ikwupụta na ịkwesịrị ịmara akụkụ niile na njirimara na njirimara yana ịme ihe na aghụghọ iji mepụta mgbasa ozi kachasị emeri - travel packages to chile. Ọ dabara, enwere ọtụtụ SEB blogs dịka nke a, nke a haziri iji mee ka mmekọrịta gị na-adịwanye ike.
Isiokwu a na-etinye aka na isiokwu nke ịmepụta backlinks PR9 dofollow. Ị ga-amụta otú azụlinks bara uru na azụmahịa gị na ihe ntanetị weebụ na nkwado na-elekọta mmadụ ị nwere ike iji rụọ ọrụ kachasị mma na mma ịbata na saịtị gị.
Gịnị kpatara ị ga - eji wuo backlinks dofollow na ebe nrụọrụ weebụ PR9?
Netwọk mmekọrịta dị mma dị ka Facebook, Twitter, na LinkedIn nwere nnukwu PageRank dị elu nke dị mma maka nlebanye SEO gị.Ihe ntanetị ndị a bụ ebe kachasị mma ebe a ga-ekwupụta ebe ị na-ede. Ịmeghachite backlinks na blog gị site na ihe nchọgharị weebụ PR9 ga-emetụta ọnọdụ ogo saịtị gị na Google. Ọ bụ ya mere ọ bụ echiche dị oke mma iji jiri ọkwa dị elu maka abamuru gị site na ịzaghachi na blog gị n'aka ha. Ọ bụrụ na emezuru ihe niile n'ụzọ ziri ezi, ị ga-enweta ikike ọzọ site na engines ọchụchọ na ọkwa dị elu.
E nwere ụdị backlinks abụọ nwere ike ị nweta site na ebe nrụọrụ weebụ PR dị elu - dofollow na nofollow. Dolinks backlinks nwere uru na saịtị gị ka ha na-ebufe mmiri njikọ. Nchọpụta ọchụchọ na-achọpụta akara nke sitere na isi akwụkwọ sitere n'aka backlinks ma nye saịtị gị ọkwa dị elu. Njikọ na "oche" nwere ike ghara ịchọpụta bọtịnụ ọchụchọ ma weta uru efu na saịtị gị. Na HTML, dofollow bụ koodu ndabara maka njikọ. Ọ chọrọ ịkwanye ihe ọ bụla pụrụ iche na URL weebụsaịtị. Kama nke ahụ, ndị backlinks na-akwa ụda chọrọ iwu na-egosi na ejikọtaghị njikọ na ọkwa.
Olee otu esi enweta postlinks dofollow PR9?
Ụzọ kachasị mfe iji mepụta redlinks dị elu bụ ikwu okwu ma ọ bụ mepụta saịtị profaịlụ. Mana nke mbụ, ị ga-eme nchọpụta ma lelee nchịkọta ogo nke nchịkọta ihe ntanetị ndị dị na ya ma tụlee ụdị okporo ụzọ ha ga-eweta na saịtị gị.
Ka anyị leba anya na otu n'ime netwọk mmekọrịta ndị kasị elu dị elu nke na-eme ka ị nweta ihe njikọ dị mma na saịtị gị.
Ịkwesịrị ịmepụta azụmahịa azụmahịa gị na Facebook, wee gaa "Tinye static HTML na peeji nke" njikọ ma hapụ ụlọ ọrụ weebụ gị ebe a ebe a. Mgbe ahụ, ịchọrọ ịchọta bọtịnụ "Dezie" ma wepu faịlụ, ndepụta. html. N'akụkụ a, ị ga-agbakwunye njikọ njikọ weebụ gị na usoro ndị a: Aha Aha Gị . Iji mechie usoro nke ịmepụta backlink onfolios na Facebook, ịkwesịrị ịpị bọtịnụ "Zọpụta ma Bipụta".
Ịmepụta backlinks dofollow na LinkedIn fọrọ nke nta ka ọ dị na Facebook. Ịkwesịrị ịmepụta akaụntụ azụmahịa gị na ngalaba "Ama nkeonwe" gunyere akara azụ dofollow gị na-adịgide adịgide. Njikọ ndị ọzọ ị nwere ike iwuli n'elu ikpo okwu a ga-abụ ntụpọ.